Wzọ 3 Conzọ mkparịta ụka ire ahịa agbanweela kemgbe afọ ndị a | Martech Zone
Mkparịta ụka ahịa ọdịnala na-agbanwe ruo mgbe ebighị ebi. Ndị na-ere ahịa enweghịzi ike ịdabere na isi okwu okwu ọdịnala na ụdị nchọpụta iji mee ka usoro ahịa ahụ gaa. Nke a na - eme ka ọtụtụ ndị na - ere ahịa nwee obere ihe ọzọ kama ịhazigharị ma ghọta eziokwu ọhụrụ nke ihe na - eme ka mkparịta ụka ahịa na - aga nke ọma.
Mana, tupu anyị agaa Ebe ahụ, olee otu anyi si nweta Ebe a?
Ka anyị nyochaa ụzọ 3 nke mkparịta ụka ahịa gbanwere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Site n’inyocha otu ndị ahịa na-eji abịakwute mkparịta ụka na onye nwere ike ịzụta ya, anyị nwere ike ịghọta ebe mkparịta ụka ire ahịa na-aga na usoro ọhụụ ọhụụ na-agbanwe iji mechie azụmaahịa nke oge a.
Omenala Na-agbanwe Agbanwe
Ka ọha mmadụ na-agbanwe, ndị mmadụ na-agbanwe, nke pụtara na a na-ere ndị mmadụ ka ha gbanwee. Ka oge na-aga, mgbanwe n'echiche ha, mkpa ha, na omume ha na-apụta ìhè. Daysbọchị ndị a, ndị a na-eresị ha ka gụrụ akwụkwọ karịa oge ha na onye na-ere ahịa soro. Nkọwa ngwaahịa, atụnyere ọnụahịa, akaebe ndị ahịa, wdg. Dị ngwa ntanetị tupu onye na-ere ahịa abanye na foto ahụ. Nke a na-agbanwe ọrụ nke onye na-ere ahia na usoro ịzụta. Ha agbanweela site na ozi onye nkwukọrịta, nye ndụmọdụ na onye okike bara uru.
Mgbanwe na-ere ndụmọdụ
Omenala ahịa ọdịnala anaghị arụ ọrụ ọzọ. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọ ụzọ ha abụọ ga-esi nwee mkparịta ụka na atụmanya ha. Ndị nwere ike ịzụ ahịa anaghị enwe oge maka ndị na-ere ahịa na-emebeghị nyocha banyere azụmahịa ha ma kachasị amasị ha izere mkparịta ụka ogologo oge. Ha choro ka ha na ndi ahia ahia ndi ghotara ihe ima aka ha di iche iche na ohere di iche iche ma ha na eme ka ha nwee ezi nghota, idozi nsogbu na imeputa uru. Ọzọkwa, “likability”, ebe ọ bụ na ọ bụ ezigbo mma maka onye na-ere ahịa inwe, anaghịzị emesi obi ike na ọ ga-aga nke ọma. Iguzosi ike n'ihe nye otu onye na-ere ahịa na-abịa nanị mgbe onye ahịa ahụ ghọtara uru.
Mkparịta ụka Ahịa nke Multi-Channel
Ihu ihu n’ihu abughizi ụzọ kachasị mkpa iji gwa ndị nwere ike ịzụ ahịa okwu. Ozi ederede, iji mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi ịntanetị, na ịnabata ihe omume pụrụ iche, bụcha ụzọ ndị dị mkpa iji zipu ozi gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị na-ere ahịa taa kwesịrị ịbụ ndị na-arụ ọrụ ọtụtụ, ruo n'ókè ụfọdụ. Otu n'ime ọwa ndị a nwere ike imetụta ndị na-azụ ahịa na, n'ihi nke a, ndị na-ere ahịa ga-agbasa ma mụta ịrụ ọrụ nke ọma n'ime ha.
Ọ bụghị ihe nzuzo. Mkparịta ụka banyere ọdịnala ọdịnala anaghị arụpụta ihe ha rụburu. A na-eji usoro ntinye aka na-agbanwe agbanwe, usoro ọhụụ dị egwu karị.
Na enwetụbeghị ụdị ohere ịnweta ozi na akụrụngwa, ndị na-azụ ahịa achọghịzi onye na-ere ahịa ọzọ. Ha choro ahia ọkachamara.
Bredị ndị ọkachamara a na-ere ahịa kwesịrị ime ka mkparịta ụka ọ bụla zụrụ ha gosipụta ezi nghọta na ịbụ onye nsogbu nsogbu na-enye ihe ngwọta maka isi ihe mgbu metụtara ụlọ ọrụ (ọbụlagodi na azịza ndị ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ha na-ere) . Ndị na-ere ahịa n’oge a na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ime mkpebi ndị mara nke ọma site n’itinye ha n’etiti mkparịta ụka ahụ. Site na nkwadobe maka mkparịta ụka ire ahịa ọgbara ọhụrụ, ha na-edozi onwe ha iji nwee ọganiihu na eziokwu, eziokwu ọhụrụ nke ahịa.
Tags: na-ere ndụmọdụire otutu ọwamkparịta ụka ahịamgbanwe ahịaNkwado ire ahịaụdị ahịa